Faxeholmen - Söderhamns kommun
Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo ee Faxeholmen AB.
Goorma ayuu kirada imaanayaa?
Qiyaastii 15ka ee bil kasta.
Dalabkii kirada ayaa iga maqan maxaan sameeyaa aniga?
Nala soo xiriir Adeegga Macaamiisha, 0270-729 50, waanan ku caawin doonaa.
Siyaabahee ayaan u bixin karaa kirada?
Via bangiga, autogiro ama bangigaaga internetka.
Waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aalo ku saabsan kiradeyda, yaan weydiyaa?
Waaxda maaliyadda 0270-729 50.
Maxaan sameeyaa haddii uu u baahan yahay wax lagu daboolo guriga?
La xiriir warbixinta qaladka telefoonka: 0270-729 50 ama email: felanamalan@faxeholmen.se haddii wax la jebiyo ama la saxo.
Waxaan guriga ku arkay cayayaan yaryar, maxaan sameeyaa?
Wac Anticimex tel: 0270-429 429.
Derisku waxay cayaaraan muusiko aad u cod dheer, yaan la xiriirayaa?
Haddii aad isku buuqsan tahay 16:00 ka dib wac: 0270-729 50 oo weydiiso warbixintaada amniga. Haddii cilladuhu dhacaan inta lagu jiro saacadaha ay mamnuuca tahay, wac warbixinta qaladka telefoonka: 0270-729 50.
Yaa ku nadiifinaayo meesha dhigashada hadii uu yaalo baraf?
Markaad kireynaysid baarkin dhigasho, adiga ayaa ka masuul ah inaad hubiso la nadiifiyey. Haddii la kireysto garaash, kireystaha ayaa masuuliyada leh si loo hubiyo in uu ka nadiif yahay barafka qiyaastii. Nus mitir ee albaabbada horteeda.
Sideen dib u cusbooneysiin karaa gurigayga?
Fadlan la xiriir Faxeholmen intaadan bilaabin dayactir. Waxaanu kuu sheegi karnaa waxa ka dhacaya aaggaaga xaafadda iyo haddii ay jiraan kharash kugu habboon.
Sidee ayaan iskaaga qori karaa guriga?
Markaad galeyso boggeena internetka, ku dhufo sanduuqa "safka iska bax" oo raac tilmaamaha. Marka la sameeyo, waa laguu soo ogeysiiyaa oo waxaan bilaabi karnaa dhibco taxadar ah U fiirso in ay waajibkuu tahay f profilka ugu yaraan 12kii biloodba mar.
Maxaa looga baahan yahay safka?
Inaad tahay 17 jir oo aad haysato lambarka bulshada ee iswiidhishka.
Waa iga lumay macluumaadka xisaabteyda, Sideen u sameeyaa?
Taabo "Booqo Isticmaal" boggaaga kana raac tilmaamaha. Waxaad sidoo kale soo sameyn kartaa inaad la xiriirto adeegga macaamiisha telefoonka: 0270-729 50 ama booqo xafiiskayaga Humlegårdsgatan 2 waanan ku caawin doonaa.
Miyaan helayaa guri aan raadinayo?
Haddii aad nasiib u leedahay inaad hesho guri dabaq ah, waxaanu ku qaadanaynaa macluumaadka deynta ah oo aan eegnaa dakhliga iyo deymaha ka hor intaadan saxiixin.
Yaa helaya guriga haddii dhowr qof ay raadinayaan?
Shanta qof ee hela dalab si ay u arkaan guriga, Faxeholmen ayaa dooranaya kireyste halka uu dhibku ka mid yahay waxyaalaha aan eegno.
Sideen u bedelayaa ama u tirtirayaa gurigeyga?
Waa inaad joogtaa 6 bilood gurigaaga ka hor inta aadan bilaabin raadinta guri cusub. Looma haysan wax saf ah oo isbeddel ah. Haddii aad ku nooshahay in ka yar shan sano ee deganaanshahaaga hadda, muddada ogaysiinta waa saddex bilood, markaad ka beddelatid ka weyn ama ka yar ama haddii aad bedesho cabbirka isku mid ah. Haddii aad ku nooshahay in ka badan shan sano ee deganaanshahaaga hadda, ogaysiis bil ah ayaa lagu dabaqi doonaa markaad u soo guurto gudaha Faxeholmen. Muddada ogeysiinta ee gurigaagu hadda waa inuu la mid yahay qofka si uu u guuro. Tusaale: Haddii aad u guurto degenaansho oo uu kiraystuhu hadda haysto ogeysiis saddex bilood ah, markaa muddadaas joojintani waxay khuseysaa xitaa haddii aad u soo guurto gudaha Faxeholmen. Joojinta aqalka waxaa mar walba lagu qoraa qoraalka dhabta ah ee heshiiskaaga ama foomkayaga.
Imasa ayuu qaadanaayaa hadaan iska kansalo gurigeyga?
Ilaa laga gaaro bisha ugu danbeysa. Tusaale ahaan, haddii aad soo war geliso 8-da Maarso, qandaraaska wuxuu dhammaanayaa 30ka Juun.
Mudo intee le'eg ayaa ah muddada ogeysiinta?
Sida caadiga ah, 3 bilood marka laga reebo wayaalada uu wareegayo meesha lagu xanaaneeyo hadii aad dhimato iyo inta ka hooseysa 24 sano jir waxaa lagaa doonayaa bil ah.
Sideen u joojiyaa guri haddii dhimasho dhacdo?
Hadii aad dhimato waxaa saxiixaayo ehelkaada ama milkiilaha guriga.
Miyaan kireyn karaa gacan labaad?
Maya, ma ogolaanno kiro gacan labaad ah.
Haddii aad rabto inaad guurto, fiiri filimka Hay'adda cashuuraha ee halkan .
Sidee baan ku helaa adeegga internetka?
Ka fiiri macluumaad dheeraad ah Söderhamn Nära.
Hadii uu telefishinkayga, shaqeyn waayo yaan la xiriirayaa?
Kala xiriir shirkadaada TV-gaaga ama Söderhamn Nära telefoonka 0270-766 10.
TV-ga telefishinku ma ku jira kirada?
Waxay ku jirtaa kirada, dhammaanba guryaha.
Ma heli karaa digniin amni ah?
Waxaad codsan kartaa digniin amaan ah "Omvårdnad direkt". Eeg macluumaad dheeraad ah halkan.
Ka fikirida hoyga
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan ururada
Ka feker sidan macaamilka
Film: Diiwaangaliska dadweeynaha, Lambarka dhalashada,Guurid Iswiidhan dhexdeeda
Warbixin ka socota Försäkringskassan.